Solve the Drive won't Work on Windows | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
3က G / 4က G – စက်ကိရိယာ
ဒီဇင်ဘာလ 26, 2018 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး ကွန်ပျူတာ, မောင်းသူ, OS ကို-STORE, OSGEAR ပံ့ပိုးမှု, ထုတ်ကုန်များ, သိုလှောင်ခြင်း, အသုံးပြုသူကို manual 0
Use the troubleshooting instructions below if you install CD, DVD ဒါမှမဟုတ် Blu-ray player drive ကိုမဆို discs တွေကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့မဆို discs တွေကိုဖတ်ရှုဖို့တတ်နိုင်သို့မဟုတ်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ.
အဆိုပါညွှန်ကြားချက် drive ကိုလုံးဝပျက်ကွက်မမူလျှင်အချို့ကိုသင်ဖြစ်ရပ်အတွက်ပြဿနာဖြေရှင်းကူညီပေးပါမည်. အောက်ကညွှန်ကြားချက်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် CD ကို, DVD ဒါမှမဟုတ် Blu-ray player drives တွေကို ဒါပေမယ့်အခြေခံအချို့ကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်. CD-ROM ကို၏ပြဿနာအလုပ်လုပ်မအသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ပျက်စရာနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်အချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှောင့်အယှက်, နောက် ... ပြီးတော့. တဦးတည်းလုံးဝအချိန်မအတွက်အမှားဖြေရှင်းရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းလျှင်အလုပ်မလုပ်, CD-ROM ကို၏အမှားကျော်လွှားရန်အသိပညာအထောက်အကူဖြစ်ပါသည်. ပေးထားသောဆောင်းပါးမှာတော့, ကျွန်တော်ကို CD-Drive ကို၏ပြဿနာအလုပ်မလုပ်ဖြေရှင်းဖို့မျိုးစုံဖြေရှင်းနည်းများကိုကြည့်ကြမည်.
အပိုင်း 1: ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကိရိယာများကို Troubleshooter ကိုအသုံးပြုခြင်း >>>
ဒီအလုပ်မလုပ်, CD-Drive ကို၏ပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရအခြေခံနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. အတိုင်းလိုက်နာအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများနှင့်အတူ, အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ရှိနိုင်ပါသည် ဒီဗီဒီ နှင့်, CD-ROM ကိုစနစ်ကအသိအမှတ်ပြု. ဤတွင်ခြေလှမ်းများဖြစ်ကြောင်း:
Windows အ key ကိုထိပုတ်ပါ + အဆိုပါ Run ကိုပေးတဲ့ dialog box ကိုဖွင့်လှစ်ရန် R ကို.
အဆိုပါ Control Panel ထဲက, ရှာဖွေရေးအကွက်ကိုရှာ, နှင့် '' Troubleshooter ကို '' ကိုရိုက်ထည့်, ပြီးတော့ '' ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း '' အပေါ်ကိုအသာပုတ်.
သင်ကဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ Item အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင်း '' Configure device ကို '' ကို click ရန်ရှိသည်. အသုံးပြုသူများသည်အတည်ပြုခြင်းအဘို့မိမိတို့စကားဝှက်တွေရိုက်ထည့်သတိပေးခံရစေခြင်းငှါ.
အပိုင်း 2: သင့် Disk ကိုပျောက်ဆုံးနေသည်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းရင်း >>>
တစ်ခု Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ပြင်ပ drive နှင့်အတူသင်္ဘော hard drive ကိုမတူဘဲ, သငျသညျဝယ်ယူရန်အပို hard drive တွေအမြဲ၏ format နဲ့သုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်တင်ပို့ကြသည်မဟုတ်. အစား, သူတို့တစ်တွေလုံးဝအလွတ် State-စိတ်ကူးအဆုံးအသုံးပြုသူသူတို့ drive ကိုအတူဆန္ဒရှိဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်ရောက်နေ, ဒါကြောင့် preformatting သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်စက်ရုံမှာ drive ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ရန်မအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်. ဒီအတိုင်းတော့, သင်သည်သင်၏ system ထဲမှာ drive ကိုသွင်းထားသည့်အခါ, သငျသညျအစားအလိုအလျှောက်ပုံစံနှင့် drive ကိုစာရင်းကဖြည့်စွက်၏ drive ကိုအတူဘာလုပ်ရမှန်းဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် Windows ရိုးရှင်းစွာစောင့်.
လှမ်း 1: Start ကိုကလစ်နှိပ်ပါ > ပွေးသှား. ရိုက် ” sysdm.CPL ” ကပြသသောပေးတဲ့ dialog box ကိုသို့. အဆင်ပြေနှိပ်ပါကရန်သင့်ကိုဆောင် ခဲ့. သင့်တယ် “System Properties” dialog box ကို.
လှမ်း 2: အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး “hardware” နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ” သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းအဲဒီမှာနေရာချထားတစ်ချိန်က. မိုင်းကိုခေါ်ခဲ့သည် “ဒီဗီဒီ / CD-ROM ကို drives တွေကို။” သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြသနိုင်ဖို့ကကို Double-click နှိပ်ပြီးပါကအောက်တွင်အခြားစက်ကိရိယာရှိသင့်တယ်. မိုင်းမေးခွန်းတစ်ခုအမှတ်အသားခဲ့ပေမယ့်အချို့ကိစ္စများတွင်, ကနာမတော်ကိုလာမယ့်တစ်ဦးအာမေဍိတ်အမှတ်ရှိစေခြင်းငှါ. မိုင်းကိုခေါ်ခဲ့သည် “AOPEN DUW1608 / ဆိုက်ရောက်” ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသည်ဆိုပါက, ဒါကြောင့်အဆင်ပြေမယ့်.
လှမ်း 3: အသစ်ထင်ရှားဟာ့ဒ်ဝဲကို Double-click နှိပ်ပြီး “AOPEN DUW1608 / ဆိုက်ရောက်” ထိုသို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေးတဲ့ dialog box ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါကိုသွားပါ “မောင်းသူ” tab ကိုရွေးချယ်ပါ “ယာဉ်မောင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်…” အောက်ကခလုတ်ကနေ.
လှမ်း 4: ယခု, ကို select “စာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတစ်ခုကနေ Install” Next ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. လာမယ့် box ထဲမှာကို select “ရှာဖွေမနေပါနဲ့. ငါတပ်ဆင်ရန်ယာဉ်မောင်းများကိုရွေးမည်” တဖနျ, လာမယ့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားတဲ့ box ကိုသင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းများအတွက်သဟဇာတဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူပြသပါလိမ့်မယ်. ငါကလတ်တလောခဲ့ယုံအောက်ခြေကနေရှေးခယျြ, ဒါကြောင့်ကိုခေါ်ခဲ့သည် “CD-ROM ကို Drive ကို [IMAPI settings ကို 1,5].” လာမယ့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါကသငျသညျပေးသည်ညွှန်ကြားချက်ပြီးစီး.
အပိုင်း 3: ဒီတစ်ခါလည်းကပျက်ယွင်းနေ DVD ကိုကြောင့် >>>
control Panel ကို
double-click နှိပ်ပြီး System ကို
ဟာ့ဒ်ဝဲ tab ကိုနှိပ်ပါ
oe ATA / ATAA controller ကိုဂိုဏ်းကို double click နှိပ်ပြီး IDE ရုပ်သံလိုင်း
တစ်ခုအဆင့်မြင့် setting ကို tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
စက်ကိရိယာ0သို့မဟုတ် 1 အစွန်းရောက် DMA မှာဖြစ်သင့် (အထင်ကရနေရာများမဟုတ်) လက်ရှိအပြောင်းအရွှေ့မြန်နှုန်းကို Ultra DMA ဖြစ်သင့်
(လျှင်မ) ဖယ်ရှားရန် device ကို Drive နှင့် DVD ကို drive ကို (ကြှနျတေျာ့အမှု၌ရှေ့ဆောင် drive ကိုခဲ့သည်) – reinstall လုပ်ဖို့ကွန်ပျူတာ reboot – တစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်ကွန်ပျူတာ-install – ပြန်ဆို 1 –7နောက်တဖန်နှစ်ဦးစလုံး settings ကိုပြန်အစွန်းရောက်မှဖြစ်ကြပြီးထိုပြဿနာကိုပုံသေကြောင်းကို.
Part4: optical drive ကိုစာတစ်စောင်တာဝန်တွေပြောင်းခြင်း >>>
ပုံမှန်အားဖြင့်, Windows ကိုအားလုံးဗားရှင်းအနေနဲ့ optical drive ကိုမဆိုဒေသခံ volumes ကိုများအတွက်သူများအောက်ပါလာမည့်ရရှိနိုင် drive ကိုစာတစ်စောင် assign. သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးအပိုဆောင်း hard disk ကို install သို့မဟုတ်နောက်ထပ် volumes ကိုဖန်တီးရန်သင့် drive ကို repartition အကယ်., ယင်း optical drive ကိုမှတာဝန်ပေးအပ်စာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်, အဟောင်းကိုအက္ခရာအဖြစ် optical drive ကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းထည့်သွင်း software ကိုရှုပ်ထွေးစေခြင်းငှါအရာ.
သင်ဤရှောငျနိုငျ “ဂီတကုလားထိုင်” ကိုယ်တိုင် optical drive ကိုမဆိုတည်ဆဲဒေသခံသို့မဟုတ်ကွန်ရက် volume အတှကျ drive ကိုစာတစ်စောင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသော drive ကိုစာတစ်စောင်တာဝန်ပေးဖို့အားဖြင့် optical drive ကိုစာလုံး၏ reassignment. အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင် drive ကိုစာတစ်စောင်သတ်မှတ်ခြင်း, နှင့်, ယင်း optical drive ကိုမှအစဉ်အဆက်ကြောင့် drive ကိုအက္ခရာပြောင်းလဲထံမှ Windows ကိုကာကွယ်ပေးသည်. သငျသညျနှစျခု optical drives တွေကိုရှိပါက, Z ကိုကသူတို့ကို assign: နဲ့ Y:. Windows XP ကိုအတွက် optical drive ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော drive ကိုစာတစ်စောင် assign လုပ်ဖို့, အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်:
Computer ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု display ကိုစာတစ်စောင်တာဝန်တွေမောင်းထုတ်
1. Control Panel ထဲကထံမှ, အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Tools များကိုရှေးခယျြ > Computer ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု.
2. လိုအပ်သောလျှင်သိုလှောင်နျဌာနခှဲအတွက်ပစ္စည်းများကိုပြသနိုင်ဖို့သစ်ပင် Expand.
3. Disk ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုကလစ်နှိပ်ပါ, နှင့်အောက်ပိုင်းညာဘက် pane ထဲကကိုသင့်ရဲ့ optical drive ကိုနေရာချထား.
4. အဆိုပါ context-sensitive menu ကိုဖော်ပြရန်ဖို့ optical drive ကို icon ကို right-click, နှင့် Change Drive Letter နှင့် Paths ပေးတဲ့ dialog ကိုဖေါ်ပြဖို့ Change Drive Letter နှင့် Paths menu ကိုကို item ကိုရွေးချယ်ပါ.
5. အဆိုပါပြောင်းလဲမှု button ကို Click နှင့် optical drive ကိုတစ်ခုရရှိနိုင် drive ကိုစာတစ်စောင် assign လုပ်ဖို့ drop-down list ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်.
6. သင့်ရဲ့အပြောင်းအလဲများနှင့်ထွက်ပေါက် Save. သင်ဟာပြောင်းလဲမှုများကိုကိုလက်ခံပြီးတာနဲ့, အသစ်က drive ကိုစာတစ်စောင်ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ကြာ.
ဂီတ drive letter
သင်တစ်ဦး optical drive ကိုများအတွက် drive ကိုစာတစ်စောင်တာဝန်ကျတဲ့နေရာကိုပြောင်းလိုလျှင်, ချက်ချင်း drive ကိုဒါမှမဟုတ် operating system ကို install လုပ်ပြီးနောက်အဲဒီလို. သငျသညျ software ကို install လုပ်ရန်၎င်း၏မူရင်းစာတစျစောအောက်မှာကြောင့် drive ကိုသုံးလျှင်, ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကိုနောက်ပိုင်းမှာအဟောင်း drive ကိုအက္ခရာသုံးပြီး drive ကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်.
ကြောင်းအာတာ, သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ရပါမည်. ထို့ပြင်ပြန်ကြားရေး Get, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
အပြည့်အဝဖော်ပြချက်များ optical Drive ကိုစက်ထူးဆန်းသတ်မှတ်ချက်များ
Blu-ray bd ဗီဒီယို player software ကို download လုပ်
ဆောင်းပါး Category: Select လုပ်ပါမောင်းသူ(200) 3က G / 4က G – စက်ကိရိယာ(40) လြှောကျလှာ(5) တီဗီ Card ကို(17) ဗီဒီယိုကဒ်(20) ကြိုးမဲ့စက်(115)OS ကို-STORE(262) အသက်(90) သတင်း(33) အခြား(76) ပရိုမိုးရှင်း(33) နည်းပညာ(56) အသုံးပြုသူကို manual(8)OSGEAR ပံ့ပိုးမှု(16) networks(6) သိုလှောင်ခြင်း(10)ထုတ်ကုန်များ(589) 3က G & ကြိုးမဲ့ကဒ်ကို(16) Apple က iPhone ကိုအိုင်ပက်, iPod(18) ကင်မရာ & အစိတ်အပိုင်းများ(10) ကွန်ပျူတာ(116) CPU ကိုပရို(158) အီလက်ထရောနစ်(9) IC Chipset(2) မိုဘိုင်းဖုန်း(248) လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်များ(12) တက်ဘလက်ပီစီကွန်ပျူတာ(40)
3 လများ 1 တပတ်အကြာ
ထောက်ခံ : (Dell က 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုကတ်ယာဉ်မောင်းကို Windows ဒေါင်းလုပ်) OS ကို-STORE ဘလော့ခ်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီး
Dell က 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုကတ်ယာဉ်မောင်းကို Windows ဒေါင်းလုပ် | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
Dell ကဝိုင်ဖိုင်ကဒ်ယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု - 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူအဘို့ကို download options များပါဝင်သည်
4 လများ3days ago
ထောက်ခံ : (Windows ကို Mac အတွက် Linux ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် OSGEAR DW1300BT RTL8814AE WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်း (မိတ္တူ)) OS ကို-STORE ဘလော့ခ်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီး
Windows ကို Mac အတွက် Linux ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် OSGEAR DW1300BT RTL8814AE WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်း (မိတ္တူ) | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
OSGEAR ကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု - အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု RTL8814AE. ယာဉ်မောင်းသူသာနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ RealTek များအတွက် download, ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည် / Qualcomm မှ
Intel က processor ​​ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် ပရိုဆက်ဆာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Nokia က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု OS ကို-STORE 64-နည်းနည်းက Windows Software များ device ကိုမော်ဒယ် စီပီယူ HTC က Samsung က HD Graphics မိုဘိုင်းဖုန်း Technology_Internet ဥပဒေရေးရာအနက် နည်းပညာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု
လွယ်ကူသော ~ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်